Lahatsoratra nataon'i Jeff Kupietzky momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jeff Kupietzky
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia fantatray fa ny fampandraisana anjara ny mpihaino marina ny hafatra mety amin'ny fantsona marina dia manakiana, nefa koa sarotra be. Miaraka amin'ny fantsona sy sehatra marobe — manomboka amin'ny media sosialy ka hatrany amin'ny haino aman-jery nentin-drazana - sarotra ny mahafantatra hoe aiza no hampiasanao vola ny ezaka ataonao. Ary, mazava ho azy, ny fotoana dia loharanom-pahalalana voafetra — betsaka kokoa ny zavatra tokony hatao (na azonao atao), noho ny misy fotoana sy mpiasa manao azy. Mahatsapa an'izany ny mpanonta nomerika
Alatsinainy Martsa 19, 2018 Jeff Kupietzky
Ao amin'ny tontolon'ny varotra ankehitriny, be dia be ny fantsona fampitam-baovao noho ny teo aloha. Amin'ny lafiny tsara, midika izany fa misy fotoana bebe kokoa hamoahana ny hafatrao. Amin'ny lafiny ratsy, misy fifaninanana bebe kokoa noho ny hatramin'izay mba hisarihana ny sain'ny mpanatrika. Ny fiparitahan'ny haino aman-jery dia midika hoe doka bebe kokoa, ary ireo dokambarotra ireo dia manelingelina kokoa. Tsy dokambarotra an-tsoratra fotsiny, dokambarotra amin'ny fahitalavitra na radio. Doka pop-up an-tserasera feno pejy ity no mahatonga anao hahita ilay «X» tsy azo esorina esorina